Intente sinombuki zindwendwe onguPatty
NgoSeptemba ukuya kuMeyi sinikela ngephakheji yasebusika nge-25 eyongezelelweyo yeedola (ipropane yokushisa kunye nenqwaba yeenkuni).
Ubunewunewu obukhazimlayo phakathi kwehlathi kwiihektare ezingama-83. Le ntente yonke yexesha lonyaka ibandakanya umatrasi wendlovukazi we-posturpedic, iketile, umshicileli waseFransi, izixhobo, izibane zelanga / ibhetri kunye neelinen. Iindwendwe zinokufikelela kwipropathi epheleleyo yokuhamba, ukukhwela ikhephu, ukutyibiliza kunye noluhlu lokuqhuba ngexesha lasehlotyeni. Akukho mipu okanye izilwanyana zasekhaya ezivumelekileyo. Irenti yekhabhinethi nayo ibekwe kwipropathi.
Iindwendwe zinokufikelela ngokupheleleyo kwipropathi ye-83 yehektare ye-snowshoeing, isileyi, ukukhwela intaba, ukutyibiliza (kuxhomekeke kwiimeko zeqhwa). Iindlela zilungiswa.
Ukususela ngoSeptemba ukuya kuMeyi ngobusuku obunye yi-$ 100 kunye nerhafu kodwa sinika iphakheji yasebusika eyongezelelweyo ye-$ 25 equka itanki yepropane yokushisa kunye nenqwaba yeenkuni.
Ukususela ngoMeyi ukuya kuSeptemba ngobusuku obunye yi-$ 100 kunye nerhafu njengoko kungekho propane efunekayo ukutshisa. Unokuthenga inyanda yeenkuni ngeedola ezili-10 xa kuyimfuneko.
Nceda ukhumbule iindwendwe kunye nendawo yazo ezirenta i-rustic cabin okanye idome ejonge inkwenkwezi ebekwe kwipropati. Zonke iirenti zingumgama omnye komnye ukunika zonke iindwendwe ubumfihlo bazo.
Ukhenketho lwenqwelomoya luyanikezelwa. Ngeedola ezingama-650 unokuthatha uhambo lwe-helicopter yemizuzu engama-20 malunga nechibi laseTalon ngelixa ufunxa i-champagne. Inani eliphezulu labantu yi-3. Iindwendwe kuya kufuneka zibhukishe ukhenketho lwazo ngexesha elifanayo zibhukisha ukuhlala kwazo kwaye zihlawule i-50% yediphozithi nge-etransfer. IHelikopta iya kuthatha iindwendwe ebaleni.
Iindwendwe ziqhubela phantsi ebaleni kwaye ziza kubona uphawu oluthi "intente / idome" thatha loo mzila ngasekunene kwakho kwaye iya kukuthatha ukuya ententeni.
Nceda ujonge intengiso yakwa-Airbnb eyahlukileyo yokuqesha indlu.
Induli yeTobogganing emi kwimizuzu emi-5 kude kumbindi wedolophu yaseBonfield kunye nevenkile ekulula ukuyenza. Iindlela zokuhamba iMattawa zifumaneka kwimizuzu engama-20 kuphela kwaye iNorth Bay ikumgama wemizuzu engama-25.
Ababuki zindwendwe bahlala kwipropathi yendlu enkulu kwaye bayafumaneka ukunceda iindwendwe zizise imithwalo yazo ententeni ukuba kukho imfuneko yokusebenzisa ecaleni.
Umamkeli ngu-24/7 ofumaneka ngefowuni.
Nceda ufowunele kuphela phakathi kwe-Ifumaneka phakathi kwe-8am -7pm ngaphandle kokuba kukho imeko kaxakeka.